optical Illusion - သုံးခုသို့မဟုတ်လေးခု | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
optical Illusion - သုံးခုသို့မဟုတ်လေးခု
တစ်ဦးချင်းစီကလေးသည် captivating optical ထင်ယောင်ထင်မှားနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိန်းဂဏန်းများ၏ drawings, ဒါခေါ် Paradoxa ။ optical ထင်ယောင်ထင်မှားစုပေါင်းသက်တမ်းအဖြစ်လူ့ဗျာဒိတ်ရူပါရုံအားလုံးရှုထောင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။
optical Illusion - သုံးခုသို့မဟုတ်လေးခု?
ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကယ့်ကိုဖြစ်ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလူတွေကိုမှတ်သားတစ်လမ်းအတွက်အတူတူ template ကိုသို့မဟုတ်အမှန်ပင်အမှုအရာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုထက်အခြားတစ်ဦးအခြို့သောကိုယ်စားပြုမှုမှတဆင့်အမှုအရာကိုမြင်သောအခါဤတလက်ပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
image ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, pdf format ကိုအတွက် template ကိုဖွင့်လှစ်:
ဂရပ်ဖစ်အဖြစ်သုံးလေးပွင့်လင်း optical ထင်ယောင်ထင်မှား
optical ထင်ယောင်ထင်မှား - ဖြောင့်သို့မဟုတ်ကောက်?
optical Illusion - သင်ဘယ်အရာကိုမြင်ကြပါ
optical Illusion - စင်ပြိုင် Lines
စာအုပ်ကိုဖတ် - လူကြီးများအတွက် optical ထင်ယောင်ထင်မှား
optical Illusion - မျက်နှာများသို့မဟုတ်ပန်းအိုး
optical ထင်ယောင်ထင်မှား - အပြိုင်သို့မဟုတ်မ
optical ထင်ယောင်ထင်မှား - ဖြောင့်သို့မဟုတ်ကွေး
ရွရွပြေးသို့မဟုတ် running | အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး
ငါး & ရေအောက်ကမ္ဘာ့ဖလား